Vegbado - Delta Engineering Belgium
Wepu Ulo Ngwongwo
Ndị na-adọka akpa
Ndị na-ere ntụ
Ndị na-eme ihe ngosi
Raylọ nkwakọba ihe ubi
Ndị na-ahụ maka okwu
A na-asọ oyi
Tebụl jụrụ oyi
Ihe mkpuchi plasma
Gluing - Fofụfụ
Ngwaọrụ nkwakọ ngwaahịa
Ihe mgbako ụkpụrụ stacking Universal
Ntụnyere akpa ego vs. kaadiboodu tray
Nchịkọta nkwakọ ngwaahịa maka iko karama
Ntinye ihe nlere maka ihe eji eme karama
Nlekọta ule nyocha
Ihe mgbako elere anya nke ukwu
Ọmụmụ ihe na-arụ ọrụ nke onye ọrụ
Ntinye uche ROI
Isiokwu Isiokwu Resistance Ihe
Ngụkọta ụgwọ Plasma
Ihe mgbako pailet pellet
Calculator Ihe Omuma
Nnwale nnwale / ịlele
Archive si Atiya "Nkuzi"
Fraịde, 09 November 2018 by Cristina Maria Sunea
Ndozi akụkụ a na - edozi - na - akpaghị aka ma ọ bụ jiri aka gbanwee
Sistemụ ka ịhazie nduzi n'akụkụ. Nwere ike belata oge mgbanwe mgbanwe nke ịwebata ahịrị! Versionsdị dị iche iche dị: akpaka (a na-achịkwa servo) - akwụkwọ ntuziaka na aka aka - ntuziaka nwere usoro ọsọ - ntuziaka zuru ezu.
bipụtara Akụkụ Akụ
Wenezde, 26 Mach 2014 by Delta Injinịa
Ihe eji akwọ ụgbọ mmiri - obosara dị 83mm
Anyị nwere ndị na - ebugharị ihe na - agbụ na ụdị dị iche iche, ihe na ụdị dị iche iche: Dịka ọmụmaatụ, obere igwe ma ọ bụ akwa agụụ maka karama na-ejighị n'aka, na-ezere karama dara!
Ihe eji akwọ ụgbọ mmiri - obosara dị 254mm
Ihe eji ebu eriri na - ebu ibu
Anyị nwere ngwongwo eriri dị larịị zuru ezu dịnụ.
bipụtara Ewepụghị eriri
Onye na-ebugharị akụkụ
Akụkụ a na-ebufe ihe na-ebu karama dina, na-enyefe karama site na onye na-ebufe onye ọzọ, na-ezere karama ndị a na-agbanye,… Maka nyocha isi wdg.
Igwe eji ebu ikuku na-ebu ibu
A na-ebunye eriri bel dị larịị nke 200mm n'obosara.
Tọzdee, 14 Machị 2017 by Delta Injinịa
Igwe osisi dị elu
Igwe a na-ebuli elu elu karama n’ogo dị elu n’elu ahịrị ndị a na-ebunye karama Nke a nwere ike ibugara karama ndị ahụ elu na ala, ma ọ bụ ibugharị ha na ọkwa dị iche. Site na njikwa ihe nkwụghachi n'akụkụ abụọ nwere obosara na-agbanwe agbanwe.
Tọzdee, 13 Machị 2014 by Delta Injinịa
Onye na-eme Pallet
Ihe odide pallet a na-enye ohere ka otu onye ọrụ rụọ pallet zuru ezu (3100 mm), site na izochi pallets abụọ dị ọkara. Belata ụgwọ njem ụgbọ elu site na 5 ruo 15%!
bipụtara Ijikwa Pallet
Akpadoro n'okpuru: pallet
Ihe nnyefe Pallet
Pọtụl pellet a na-enye ndị na-ebugharị ebugharị ihe na-adịghị na ya. Mbelata oge itinye aka na onye ọrụ ma zere gwongworo pallet na mmepụta ahụ.
Enwere ike itinye ya na igwe na-adọba ụgbọala na Delta iji nweta ahịrị zuru oke.
Lane switcher - 1 n'ime ụzọ abụọ
Itzọ a na-ekewa ahịrị 1 na-abata n'ahịrị abụọ na-apụ apụ. Wayzọ a, ị ga-enweta ọsọ ọkpọ kwesịrị ekwesị (agaghị agabiga ọsọ ọsọ karama ọ bụla).
bipụtara Lane yipada
►Mbipụta ndị nchụ nta akụkọ
►Wepu Ulo Ngwongwo
►Ndị na-adọka akpa
►Ndị na-ere ntụ
►Ndị na-eme ihe ngosi
►Raylọ nkwakọba ihe ubi
►Ndị na-ahụ maka okwu
►A na-asọ oyi
►Tebụl jụrụ oyi
►Ihe mkpuchi plasma
►Gluing - Fofụfụ
►Ngwaọrụ nkwakọ ngwaahịa
►Usoro nlekota oru
►Packzọ nkwakọ ngwaahịa
►Mpempe akwụkwọ Flat
►Nyefee okpomọkụ na-akpụ akpụ
►Na-akpụ akpụ ịkpụzi
►Nrụgide ire ere
►Ọdụdọ & Mechanical
►Delta Injinịa Belgium
►Ụgbọ njem ọha
►Ụgbọ ala mgbazinye
►ụlọ oriri na ọṅụṅụ
►Obodo dị nso
© Delta-Injinịa. Ikike niile echekwabara.
Meziwanye arụmọrụ gị
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji kuki iji hụ na ị ga-enweta ahụmịhe kachasị mma na weebụsaịtị anyị.